Incubator | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Indlela yokwenza idivaysi yokufudumala ngaphandle kwefriji? Ukuqeqesha ividiyo
Ukukhulelwa kwezinkukhu ngumsebenzi othakazelisayo kakhulu. I-incubator eyenziwe yinto eyakhiwa kakhulu futhi ibuye ibe nokonga. Ama-incubator amadivaysi akhiqizwa ezimbonini ezikhethekile iyintokozo ebiza kakhulu, futhi labo abafuna ukuzala izinkukhu ngokuvamile abakwazi ukuthenga imishini enjalo.
Izinzuzo nezinkinga ze-incubator ye-Blitz, imiyalelo yokusetshenziswa kwedivayisi
Namuhla, kubalimi bezinkukhu ezizimele, ukukhetha i-incubator enhle futhi enokwethenjelwa kuyinkinga ebalulekile. Njengoba kunikezwe ukuthi umlimi uyingozi ezitshalweni zakhe, isifiso sakhe sokuthola umshini onomgangatho ongenakutholekayo siyaqondakala. Namuhla sizokhuluma ngomunye walawa madivaysi - incubator ye-Blitz 72.
I-Ovoskop: indlela yokuhlomisa kahle amaqanda
Ukuhlola amaqanda, kokubili ngaphambi kokutshala futhi ngesikhathi, kuyiminyathelo ebalulekile ekuzaliseni izinkukhu. Umsizi omuhle kulolu daba i-ovoscope - idivaysi eyenza sikwazi ukubona iziphambeko, ukungavamile, noma ukuqapha ukuthuthukiswa okulungile kombungu. Iyini i-ovoscope? I-Ovoskop iyisidingo esikhethekile esisizo lapho ukulawulwa kwezinto eziphilayo zekhwalithi yokugcwalisa kwenziwa khona.
Kungenzeka yini ukwenza i-thermostat ngokwayo i-incubator (i-thermostat diagram)
Ukufakelwa kwamaqanda okuphumelelayo kungenakwenzeka uma kungekho mimoya yokushisa eqinile. Le nqubo inikezwa i-thermostat ekhethekile ye-incubator, egcina izinga lika-± 0.1 ° C, kuyilapho lingashintsha izinga lokushisa kusuka ku-35 kuya ku-39 ° C. Izimfuneko ezinjalo zihambelana namadivaysi amaningi adijithali namadivayisi we-analog.
Indlela yokukhetha i-thermostat ye-incubator, izinhlobo eziyinhloko namamodeli athandwayo amadivayisi
Enye yezindlela ezivame kakhulu zokulima namuhla izinkukhu zokulima. Lokhu kungenxa yokuthi kukhona isikhala esincane esincane kanye nezindleko ezingadingekile zemali. Ikakhulukazi ukukhishwa kwezinkukhu nokusebenza kwazo okuqhubekayo. Lokhu kungenziwa ngisho nasefulethini besebenzisa i-incubator evamile ene-thermostat.
Ingabe kufanelekile izinkukhu ezikhulayo e-Cinderella incubators?
Kunzima kumlimi wanamuhla ohilelekile ekuzaliseni izinyoni ukwenza ngaphandle komshini onjalo oyisimangaliso njenge-incubator. I-incubator ngumshini ongathengi futhi onokwethenjelwa ovumela ukuthi ukhule inani lenani elincane ongalindela kulo, kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani. Emakethe yanamuhla kukhona inqwaba yamamodeli, ahlukile kumandla, ukusebenza kanye nentengo.
Sikhula izinkukhu ku-incubator
Ukufaka amaqanda ezinkukhu ekhaya kuyathakazelisa kakhulu, kodwa kunalokho kunzima. Ukuze uthole inzalo enempilo, elula, enhle ngesikhathi esifanele, kufanele ulandele ngokuqinile imithetho eminingi ozothola ku-athikili yethu. Sizochaza ngokuningiliziwe yonke inqubo yokufaka izinkukhu, ukusukela ekukhethweni nasekubekeni impahla kudivayisi, ekupheleni kokuzalwa kwezinyoni ezincane ezijabulisayo nokulindelwe isikhathi eside.
Indlela yokukhetha i-incubator yamaqanda: izici zezinga eliphezulu
Intuthuko yezobuchwepheshe ayimi futhi njalo ngonyaka imikhiqizo eminingi nangaphezulu ifika ezimakethe. Lokhu kusebenza futhi kuma-incubators. Abakhiqizi bahlale beveza imikhiqizo emisha, ukuze babeke abathengi emsebenzini onzima wokukhetha i-incubator engcono yamaqanda. Ake sizame ukucabangela izinzuzo nezinsalela ezihlukahlukene eziyisishiyagalombili zemikhiqizo efanayo, okuyizona abaholi ekuthengiseni leli qembu lemikhiqizo.
Indlela yokukhetha i-incubator efanele ekhaya
Bonke labo abacabangela ukukhulelwa kwezinkukhu, kuqala ukulalela "imishini". Ukubeka kuhle, kodwa ngezinqwaba eziningi indlela enjalo ayilungiswanga, futhi akuzona zonke izinkukhu ezizohlala zihlalise esihlahleni. Ezimweni ezinjalo, amayunithi akhethekile afaneleke kakhulu. Sithola indlela yokukhetha i-incubator enokwethenjelwa, esekelwe kuzici zayo.
Izici zokusebenza kwe-incubator Ideal hen
Ezingxenyeni eziningi zomkhaya, umuntu angazwa i-hubbub engavumelaniyo: i-hen, i-quack of duck, i-giggle ye-goose, ne-turkeys ehlabayo. Ukuze ungathengi izinyoni ezincane njalo entwasahlobo, umnikazi unenzuzo kakhulu ukuthatha inyoni epulazini lakhe. Ukwenza lokhu, udinga ukuthenga idivaysi efana ne-incubator. Ake sicabangele ama-incubators "I-Ideal hen," eyenziwa yi-Novosibirsk eqinile "i-Bagan".
Izici zokusetshenziswa kwe-incubator yasekhaya "Layisha"
Namuhla, imakethe yasekhaya ihlinzeka ngenani elikhulu lezinhlobo ezahlukene zama-incubators, kokubili okwenziwa eRussia futhi angeniswe. Izinyoni ezizalisayo yibhizinisi elinomthwalo wemfanelo elidinga ulwazi olufanele kanye nemishini. Njengoba iningi labalimi bezinkukhu lithi, akufanele kube nzima ukuthenga ama-incubators angaphandle, ngoba kukhona imikhiqizo yasekhaya ephezulu.
Sibutsetelo se-incubator yama-egg for amaqanda "Okukhuthazayo-1000"
I-incubator eyenzelwe inombolo enkulu yamaqanda ithatha umlimi wezinkukhu endaweni entsha, ephumelelayo kakhulu. Ukusetshenziswa kwamakamelo anjalo akuvumela nje kuphela ukuthi uthole inqwaba yezinkukhu, kodwa futhi kuqinisekisa ukuthi bayakuzuza kahle futhi, ngenxa yalokho, bazuze imali engenayo. Ummeleli ophezulu futhi okhiqizayo ububanzi bamadivayisi anjalo yi-"Stimul-1000".
Indlela yokwenza i-incubator yamaqanda ngezandla zakho
Если вы являетесь владельцем приусадебного хозяйства, данная статья поможет вам в организации обогрева инкубатора. Вы узнаете, какие существуют нагревательные элементы, и какие модели являются наиболее эффективными. Sizophinde sigxile kuma-incubators akwenzayo - imiyalelo eningiliziwe yamanothi amaningana azohlinzekwa ukunakwa kwakho.
Ukubuyekezwa kwe-incubator yamaqanda "i-Titan"
Abalimi abaphethe ipulazi elincane, basebenzisa ngokucophelela ukukhetha kwe-incubator yokuzalisa izinkukhu. Ngesikhathi esifanayo, ukunakekelwa kukhokhwa ohlelweni lokulawula, umoya, umoya kanye neminye imingcele ebalulekile yedivayisi. Ngezansi sizokhuluma nge-incubator yesimanje ukusetshenziswa kwekhaya kwegama elithi "Titan".
Uhlolojikelele lwe-Incubator yamaqanda uCovatutto 108
Ungathola ukudideka phakathi kwezinhlobonhlobo zamadivaysi ahlukene ekukhuliseni amatshitshi, kanti yonke impumelelo yebhizinisi lezinkukhu ivame ukuxhomeke emphumela walezi zosesho. Ngakho-ke, ukhethe imodeli ye-incubator oyifunayo, kufanele uthembele kubakhiqizi abafakazelwe, abasabela kahle abantu abaye bahlangabezana nemikhiqizo yabo.
Buyekeza i-incubator yamaqanda "Remil 550TsD"
Incubator "Remil 550TsD" eside futhi ngokuqinile wanqoba imakethe ensimini yayo. Le divayisi ikuvumela ukuba uhlanganise inani elikhulu lamaqanda ezinyoni. Ngenxa yokusebenza okunokwethenjelwa kwedivayisi yokugcina isimo sezulu sangaphakathi, i-Remil 550CD iletha ukukhishwa kwamaphesenti angama-95 okuqala okubekwe ukufakelwa.
Sibutsetelo se-incubator yamaqanda "Ukuvuselela i-IP-16"
Kunezinhlobo zezinkukhu, njengokuthi, i-Dutch enhle ehlile-ehlile, ekhishwa emisebenzini yomama futhi engafuni ukuxosha amaqanda. Ezinye izinkukhu zizama ukufeza ngokwethembeka umsebenzi wabo womzali, kodwa izimo zangaphandle ziphazamisa. Ngakho lo muntu wasungula i-incubator ngesikhathi esifanele futhi ngaleyo ndlela wayandisa kakhulu inani lezinkukhu, manje elidlula inani kathathu labantu emhlabeni.
Sibutsetelo se-incubator yamaqanda Sovatutto 24
Ama-incubators wokukhiqiza kwamanye amazwe ahlukaniswa ukusebenza okuhle, umhlangano ophezulu wekhwalithi nokusebenza okunokwethenjelwa. Iningi lemisebenzi kumadivaysi anjalo ayenzizenzekelayo futhi ayidingi ukunakekelwa njalo komlimi. Omunye wabakhiqizi abathandwayo kakhulu abakhiqizi bezindlu zasendlini yinkampani yase-Italy engumNazi.
Sibutsetelo se-incubator yamaqanda "IFH 1000"
Ukufakelwa komzimba kuyinkimbinkimbi, impumelelo yayo kuxhomeke ezintweni eziningi. Amapulazi asebenza ekuzaleni kwezinyoni zezolimo asebenzisa isikhathi eside futhi esebenzisa ngempumelelo amadivaysi anamuhla ngezinhlelo zokulawula okuzenzakalelayo zemingcele ebalulekile emibungu. Elinye lala madivayisi - i-incubator "IFH 1000".
Indlela yokukhipha amagciwane nge-incubator ngaphambi kokubeka amaqanda
Ukuze izilwane ezincane ezinempilo zifakwe ku-incubator, idivayisi kufanele ilungiselelwe kahle ukusebenza. Ngaphezu kokufudumala, ukubeka izinkomba ezifanele nokunye okunjalo, ngaphambi kokusebenzisa idivayisi, kuyadingeka ukuba wenze ukukhipha imishanguzo. Kanjani futhi yini ukukhipha amagciwane nge-incubator, okuchazwe kulesi sihloko.